‘I-diet iyawuhlukumeza umzimba’
UNkk Ford-Mthethwa ubeluleka abesifazane abebehambele umcimbi wabesifazane ohlelwa yiSolezwe, iNtandokazi Women’s Club, obuseMhlanga ngoMgqibelo odlule uchaze ngengozi yama-diets. Isithombe: NQOBILE MBONAMBI AFRICAN NEWS AGENCY ANA
PHILI MJOLI | August 29, 2019
INDLELA yokudlela ukuncipha eyaziwa nge-diet, amatiye nama-shakes iyamnciphisa ngokushesha umuntu kodwa iyawuhlukumeza umzimba ngoba akulula ukuthi ayisebenzise impilo yakhe yonke.
Lokhu kushiwo uNkk Ella Ford-Mthethwa owungoti wokudla nomsunguli we-Ellagence Boutique.
UNkk Ford-Mthethwa ubeluleka abesifazane abebehambele umcimbi wabesifazane ohlelwa yiSolezwe, iNtandokazi Women’s Club, obuseMhlanga ngoMgqibelo odlule uchaze ngengozi yama-diets.
Uthe angenisile kwabesifazane abafuna ukuncipha ngokushesha. Ayawuwohloza ngokushesha umzimba kodwa anengozi yokuthi abawasebenzisayo bazithole sebeshodelwa izakhamzimba ezithile emzimbeni.
“Kuma-diets kukhona athi ayingadliwa imikhiqizo yobisi, amanye athi singadliwa istashi nokunye kodwa ukuze umzimba ube nempilo udinga ukuthi udle ukudla okubhalansile. Idiet ethi kumele ungayidli imikhiqizo yobisi ingakubeka engcupheni yokuthi uzithole usunenkinga yamathambo ngokuhamba kwesikhathi.”
Abesifazane kumele bazifundise ukuhlaziya ukuthi ngabe imizimba yabo ayigqilazeki yini uma belandela lawo ma-diet.
“Singabantu besifazane siyayithanda into ezoveza umphumela ngokushesha, asibe sisabheka ukuthi leyo nto yenzani emzimbeni. Uma uqala uhlelo lokuncipha kumele kube wuhlelo oluzowuncenga umzimba wakho, kube yinto ezokwenza ukuthi umzimba wakho uphile kahle uvikeleke nasezifeni.”
Indlela elula umuntu angayisebenzisa wukudla okudingwa wumzimba ngendlela eyiyo.
Uthe abanye bayazifela ngama-shakes ngoba benenkolelo yokuthi azobasiza bathole imiphumela emihle yokuncipha. Uthe i-shake kumele uyiphuze ngoba ihambisana nendlela ethile yokunakekela umzimba wakho oyilandelayo, ingathathi isikhala sokudla.
“Kukhona i-shake oyiphuza ngemuva kokuthi kade uzivocavoca amahora athile. Yenzelwe umzimba obunyakaza hhayi noma yimuphi. Kukhona obafica bewaphuza bezihlalele bakhethe ukuthi bangakudli ukudla okuthile bese bephuza i-shake,”
Amatiye okuthiwa ashisa amafutha noma avala inhliziyo uthe aphambene nokusebenza kwemvelo ngoba imvelo ithi umuntu kumele alambe kodwa wona enza ukuthi umuntu angalambi.
“Itiye liphuzelwa ubumnandi noma ukuthoba umzimba kodwa lawa asenezithako eziningi ezenza okungale kwalokho itiye elenzelwe kona.”
Abantu besifazane kumele baqaphele ama-diets okuthiwa ngama-blood type okulandelwa indlela yokudla okuhambisana negazi lakho. Uthe alukho ucwaningo oluphelele olwenziwe ngawo.
Bheka nasekhasini 27 ukubona ukuthi beziswenke kanjani Izintandokazi emcimbini wazo.